Serasera.org - Blog: novembre 2003
Naverina ny fampatsiahivana
Nandritra ny fotoana vitsivitsy dia natsahatra kely aloha ilay fampatsiahivana an'ireo izay tsy namangy ny namana nantritra ny 1 volana. Naverina indray izany amin'izao.
Toa izao ilay izy ary:
- Raha tsy mamangy ny namana ianao ao anatin'ny iray volana dia mahazo hafatra famatsiahivana.
- Toa izany ihany mandritra ny 3 volana raha mbola tsy mamangy mihitsy.
- Rehefa tonga ny volana faha 4 taorian'ny fampatsiahivana voalohany ka mbola tsy mamangy ny namana ihany dia voafafa ny anarana sy ny mombamomba anao rehetra.
- Ho an'ny namana misoratra anarana. Raha misoratra anarana ianao ka tsy miditra ato amin'ny namana ao anatin'ny 20 andro aorian'iny dia voafafa ihany koa ny anarana.
- Ilay isa ery ambany ery io dia milaza ny isan'ny namana mamangy ny namana. Ny anarana voafafa izany tsy ao amin'io intsony.
Publié par Eugene Heriniaina à 11/20/2003 01:22:00 PM Aucun commentaire:
Vaovao maromaro miaraka
Natambatra ato ny vaovao amin'izay tsy mandefa email isak'izao mihetsika izao.
:: Fampidirana sary tsy nandeha
Tsy nandeha teo ny fampidirana sary noho ny fifindra-monina. Efa mandeha izy amin'izao fotoana izao fa azonareo ampidirina amin'izay ny sary. Misaotra an'izay nanome fanamarihana. Raha mbola manana olana dia alefaso email aty amiko admin@namana.serasera.org ny sary fa hapetrakay.
:: Publicités eto amin'ny namana
Marina fa manembatsembana matetika ireo publicités vazaha anakiroa ireo. Manampy be dia be amin'ny fahazoana vola hanofana ny lohamilina (serveur) anefa ireo ka hotazomina aloha mandrampisian'ny mpanohana raikitra (irariana ho Malagasy). Ho hita eo ihany
:: Chat na Resaka Mivantana
Betsaka ny mitaraina fa tsy tafiditra tao amin'ilay resaka mivantana intsony tato ho ato. Ny antony dia ny zavamisy eo amin'ny fitaovana Java sy ny Microsoft. Rehefa afaka mamaky Java tsara ny version ampiasaina dia mety ilay izy. Azo atao koa anefa ny mampiasa an'ilay fitaovana "Syllabik" izay azonao jerena ao amin'ny http://chat.serasera.org
:: Fihaonana 29 novambra 2003
Raikitra izany fa hisy fihaonan'ny namana ao Antananarivo ao Ambohijatovo amin'ny 29 novambra 2003 izao.
Azonao arahina ao amin'ny
ny dinidinika momba izany.
:: Biz'oroka ho anareo fa tsy ho ahy
Misaotra an'ireo izay nanome biz'oroka ahy tamin'ity volana novambra ity. Fankasitrahana angamba no fandraisako azy. Na izany aza anefa dia angamba tsara raha ifampizaran'ny samy namana ilay izy. Misaotra betsaka.
Publié par Eugene Heriniaina à 11/11/2003 01:21:00 PM Aucun commentaire: